Mivavaha ka aza mitsahatra - ZOARA FANANTENANA
Mivavaha ka aza mitsahatra
25. février, 2013Fiainam-panahy Commentaires fermés sur Mivavaha ka aza mitsahatra
Fomba amam-panahy ny mivavaka fa tsy fomba amam-panao.
Ny kristiana dia tsy maintsy mivavaka mandrakariva ary tsy mahazo mijanona satria ny vavaka no fanovozan-kery avy amin’Andriamanitra Ray amin’ny alalan’i Jesoa Kristy.
Mety efa miaina izany ianao, tsara tokoa izany ary tohizo hatrany mba hahafahanao mihazona tsara ny finoanao!
Raha toa ka efa kristiana tokoa ianao kanefa tsy mbola nanao izany, ireto misy tari-dalana tsotra mba hanombohanao fomba fiainana vaovao feno vavaka. Fake replica watches
Tsarovy fa efa miandry anao mandrakariva Andriamanitra mba hiantsoanao Azy matetika, trandraho fa ho hitanao ny hamamin’ny fiarahana aminy rehefa zatra miresaka aminy ianao.
INONA MOA NY VAVAKA ?
Ny vavaka dia resaka ifanaovana amin’Andriamanitra, mitondra ny fontsika sy ny tenantsika ho eo anatrehany ary Andriamanitra kosa dia efa miandry antsika mandrakariva ka raha vantany vao miantso isika dia mamaly Izy. Cheap watches
Manomboka eo dia mifampiresaka Andriamanitra Ray, Zanaka, Fanahy Masina Izay iray ihany sy ny olona izay mivavaka aminy. Ny vavaka izany dia fifampiresahana tsotra, mety ho miteny eo amin’ny vava na mibitsibitsika na koa tsy miteny fa miresaka ao am-po mangina, mety mihetsika ny vatana, mandeha eny an-dalana, mivezivezy ao an-trano, ao am-piasana, mijanona, mijoro, mipetraka, na koa tsy mihetsika. Azo atao amin’ny alalan’ny hira koa ny vavaka.
Tsy ilàna fomba fiteny manokana na firesaka miavaka fa mila teny vokatry ny fo fotsiny ihany.
Azo atao tsara ny mivavaka miaraka amin’olon-kafa, miaraka amin’ny fiangonana sy ny fikambanana ary amin’ny toerana rehetra. Fake Guess Watches
Manomboha ary fiainana feno vavaka isan’andro. Ataovy fomba fiainanao ny manolotra ny tena ho fanatitra velona amin’ny alalan’ny vavaka izay fanompoam-panahy tsy maintsy ataon’ny kristiana.
«Koa amin’izany mangataka aminareo aho, ry rahalahy, noho ny famindram-pon’Andriamanitra, mba hatolotrareo ny tenanareo ho fanatitra velona, masina, sitrak’Andriamanitra, dia fanompoam-panahy mety hataonareo izany. » Romana 12:1